नारायणी सिमेण्ट उद्योगले उत्पादन भारत निकासी गर्ने
आईतवार, माघ १८, २०७१ साल,
काठमाडौं माघ १८ गते । नारायणी सिमेण्ट उद्योगले आफ्नो उत्पादन भारत निकासीको तयारी गरेको छ। बाराको लिपनीमालस्थित उद्योग परिसरमा शनिबार आयोजना भएको मेची–कोशीका डिलरहरुको उद्योग अवलोकन तथा बिजनेस मिट कार्यक्रममा उद्योगका प्रबन्ध सञ्चालक सतीस चाचानले उद्योगले आफ्ना उत्पादनको भारत निकासीको लागि अन्तिम तयारीमा भएकौ जानकारी दिएका हुन्।
ुभारतमा निकासीका लागि बीआइएसको प्रमाण लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छु, प्रबन्ध सञ्चालक चाचानले भने। उनले उद्योगले निकट भविष्यमा स्वस्तिक ब्राण्डमा पिएससी सिमेण्ट पनि उत्पादनको योजना राखेका जानकारी दिए।
चाचान समूहको सो उद्योगले हाल त्रिशक्ति सिमेण्ट प्रिमियम ओपिसी, त्रिशक्ति सुपर र बज्रशक्ति पिपिसी उत्पादन गर्दै आएको छ। उनले माघको अन्तिम साता नेपालगञ्जको गनापुरमा जयवागेश्वरी सिमेन्टस् प्रालिको नामबाट अर्को उद्योग सञ्चालनको तयारी भएको पनि बताए।
कार्यक्रममा मध्यमाञ्चल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अरुणराज सुमार्गीले उत्पादनमा उत्पादक आफैं विश्वस्त हुनु को गुणस्तरीयताको प्रमाण भएको बताए। उनले उर्जा अभावको समस्या समाधान हुनेबित्तिकै नेपालमा सिमेण्टमा पर्याप्त लगानी आउने विश्वासमेत व्यक्त गरे। कुनै पनि बस्तुको बजार बिस्तारका लागि व्यवसायीबीच समस्याका बारेमा छलफल र सहकार्य प्रभावकारी हुने पनि उनको धारणा थियो।
चाचान समूहका अध्यक्ष बाबुलाल चाचानले उत्पादनको गुणस्तरमा आफूहरुले कहिल्यै कुनै प्रकारको सम्झौता नगरेको दाबी गरे। गुणस्तरका कारणले उद्योगले ११ वर्षको अवधिमा बारामा ३ ओटा समान क्षमताका प्लाण्ट सञ्चालन गरेको भनाइ उनको थियो। उपभोक्ताको विश्वासका कारणले आफूहरु नेपालगञ्जमा अर्को उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेको पनि उनले बताए।
सञ्चालक ताराचन्द खेतानले गुणस्तरप्रति उपभोक्ताको विश्वास नै उत्पादनको आधार हुने स्पष्ट पारे। उद्योगका महाप्रबन्धक एवम् प्रेसिडेण्ट बर्क्स उमेशचन्द्र ठाकुरले उद्योगले उच्च प्रविधि र दक्ष प्राविधिकहरुबाट उच्च गुणस्तरको सिमेण्ट उत्पादन गर्दैआएको बताए। उनले हाल उद्योगले प्रतिदिन एकहजार ५० मेट्रिक टन उत्पादन गरिरहेको जानकारी पनि दिए। कार्यक्रममा मेची र कोसीका बिक्रेताहरुको सहभागिता थियो।
माछापुच्छ्रे बैंकले ११५ जना कर्मचारी माग्यो, कसरी दिने आवेदन ?
पहिलो पटक ठूलो संख्यामा उपसचिव र सहसचिवको विज्ञापन आह्वान
क्यानको निलम्बन फुकुवा गरेको भोलिपल्ट नै पारसको कप्तानबाट राजिनामा घोषणा
के बन्लान डा. भगवान कोइराला त्रिविको उपकुलपति ? उनिसहित तीन जनाको नाम सिफारिश
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको स्वागतमा चार दिनमै फूलबारी बन्ने भो
अब अष्ट्रेलियामा नेपालसहित तीन देशका विद्यार्थी जान कडाइ हुने